भाद्र २०, २०७८ आइतबार 49
छिमेकी प्रताप गिरीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका शर्माले कतारबाट फर्किएर डेढ वर्ष अघिमात्र ५ मिनेटमाथिको भोगेनीमा माइजूकी आमा नर्वदी पाध्याको घर किनेका थिए। घर सरेपछि पौडेल परिवारले सुरक्षित ठानेको थियो। ‘झन्डै सय मिटरमाथिबाट आएको पहिरोले घर पुरिदियो,’ गिरीले भने, ‘बरु उहाँहरू बाँधस्वाँरामै बसेको भए हुने रहेछ, आज यो अवस्था देख्नुपर्‍यो।’
पहिरोले पुरिएर शर्माकी आमा ७५ वर्षीया कौशिला, ३५ वर्षीया श्रीमती भगवती, दुई छोरीहरू १६ वर्षीया विमला, ११ वर्षकी विनीता र ९ वर्षीय छोरा विनोद पौडेलको मृत्यु भएको हो।राति करिब डेढ बजेतिर पहिरो खसेको थियो। दर्के झरी परेकाले पहिरो जान सक्ने शंका गर्दै राति गाउँलेका धेरै जना जागै थिए। तत्कालै उद्धारमा जुटेका स्थानीयले कौशिला, विमला र विनीताको शव निकालेका हुन्। विमला १२, विनीता ४ र विनोद ३ कक्षामा पढ्थे।
छोरा नभएको र तीन छोरीको बिहे भएकाले नरबदीले घर बेचे पनि बाँचुन्जेलसम्मका लागि भन्दै त्यसकै एउटा कोठामा बस्दै आएकी थिइन्।
अर्का छिमेकी प्रेमप्रसाद पौडेलका अनुसार माधव गत चैतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि फेरि कतार गए। ‘पहिला पनि कतार गएर फर्किएर आएपछि घर किन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘असुरक्षित ठानिएको स्थानमा भने अहिलेसम्म केही भएको छैन। सुरक्षित ठानिएको स्थानमा यस्तो अवस्था आइलाग्यो।’ घटनापछि शर्मा नेपाल फर्कंदै गरेको उनले बताए।
बूढी भइसकेकी आमासहित ६ जनाको परिवार किनेको घरमा सरेको पनि आउने मंसिरमा २ वर्ष पुग्छ। सानैमा बुवाले छाडेर गए।
त्यसमाथि आर्थिक स्थित निकै नाजुक भएकाले आफैंले नयाँ घर बनाउन नसक्ने लागेर उनले गाउँकै एकल वृद्धाको घर किनेका थिए।राति सवा २ बजेतिर गएको पहिरोमा घर पुरिँदा ७० वर्षीया आमा कौशिल्या, ३५ वर्षीया पत्नी भगवती, छोरीहरू १५ वर्षीया विमला र ११ वर्षीया विनिताका साजै ९ वर्षका छोरा विनोदलाई सधैंका लागि गुमाए।
Prevश्रीमान जुन कार्यालयमा सफाइकर्मी छन्, त्यहीँ कार्यलयमा श्रीमति प्रमुख बनेर आएपछि….
Nextअन्तिम पत्रमा : `म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन` मात्रै भनेको भए मैले मर्नुपर्ने थिएन
मो,टरसाइकल दु,र्घट,ना हुँदा एक युवकको नि,धन
लालबहादुरले सोचेका पनि थिएनन् त्यो नै अन्तिम बिदाइ बन्नेछ !
धनगढीमा भोलिदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने